छिद्रताको प्वालमा नेपाली समाज टेक्सासको चुनाब
- पुण्य पाण्डे [ टेक्सास, अमेरिका | ४ हप्ता पहिले प्रकाशित
विषय २०१६ तिरको हुनुपर्छ, म दशैको टिका र टोपी लगाएर क्यान्सस सिटिको एउटा स्थानिय पसालमा गएको थिए। त्यहाँ एकजना अफ्रिकन मुलका मानिसले मलाई प्रश्न गरे, त्यो के हो? उनको प्रश्न मेरो टोपिका लागी थियो । मैले, यो हामी नेपालीहरुको परिचय हो । सामान्यतय हामी हाम्रो चाड र विशेष अवसरमा लगाउँछौ ।
उनले मलिन अनुहार लगाएर भने “हाम्रो पनि थियो रे तर ….” ।
हाम्रो पनि थियो रे तर …. पछिका मौनतामा हजारौ प्रश्नहरु गुमनाम भएर यो अमेरिकि भुमिमा छरपस्ट भएको सहजै अनुमान गर्ने सकिन्थ्यो । होला, सयौ पुस्ता सम्पन्नताको भुमिमा बसेर पनि कता कता आफ्नोपन, आफु र आफु भित्रको मँ हराए जस्तो । सम्पन्नता र विकास फगत पैसा, धनि देशसँग मात्र मितेरि खेल्दो रहेनछ । आधुनिक संसार र त्यसको नेतुत्व गरेको यस अमेरिकि भुमिमा हामी ‘नेपालीसमाज टेक्सास’ को चुनाबि प्रक्रियामा छौ । हाम्रो पनि थियो रे तर …. र NST चुनाबको सम्बन्ध के ? सामान्य रुपमा हेर्दा हामी लाई यो विषय सोचेर बस्ने फुसर्द पनि छैन किनकि हामी यहाँ पैसा कमाउन आएका हौ तर हाम्रा सन्तति ….? हामी नेपाली अमेरिकि समाजको कुन काल खण्डमा छौ, हामी हाम्रो समाजको सामाजिक संस्थाको नेतुत्व चुनिदै गर्दा यो भुमिमा हाम्रा अबका २ -३ सय वर्षे पछिका हाम्रा सन्ततिहरुलाई सम्झना गर्ने र त्यसका लागी आधार सिर्जना गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? नेतुत्वले विषयवस्तु र् हाम्रो दायित्व बुझ्न सक्छकि सक्दैन ? मुल प्रश्न त्यो बन्नु पर्छ ।
हाम्रो समग्र Mind set, मुलत हामी भौतिक विकास कम भएका देशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हरुको फरक छ । हामी अमेरिका बस्दै शक्तिको आडमा भुमिलाई आफ्नो अनुकुल सिमा तोकेर बसेको भुमिमा बस्दैमा हामी अब्बल मानिस, प्रायः सबै हामीलाई थाहा छ भन्ने भ्रमित Mind set वनाएर बसेका हुन्छौ । त्यो Mind set ले समग्र विषयलाई, नेपाली अमेरिकन समाजको ऐतिहासिक महत्वलाई यो वेला नै बुझेन र इतिहासको जग प्रस्तुत गरेन भने, वा म सँग यति सम्पति, व्यापार छ, त्यो नै हाम्रो सम्पन्नता र सन्तानको उज्जवल भविष्यको आधार मान्ने हो भने, किन यस अमेरिकि समाजमा अफ्रिकन समुदाय आज सम्म अस्तित्व र आफ्नु पनका लागी संघर्ष गरिरहनु पर्ने स्थितिमा छ । अमेरिकि समाज वर्गिए समाज हो । वर्ग वा भनौ हेर्दा देखिने रङ्को आधारमा सुस्त रुपमा अमेरिकि समाज विभाजित छ । यस अर्थमा एउटा हाम्रो समाजको व्यक्ति व्यापारि वा अरबपति वा डक्टर भएर हाम्रा सन्तति बर्गीय विभेदबाट विमुख बन्दैनन । समग्र समाजको उत्थानको लागी एउटा सानो सामाजिक संस्थाको नेतृत्वले आज खेल्ने भुमिका अरबौको व्यापार गर्ने व्यक्तिको भन्दा उच्च हुन्छ ।
नेतुत्व सामान्य मानिस भन्दा अलिक भिन्न हुनुपर्छ। समाज,देश, भुगोल र परिस्थिति लाई पर क्षितिज सम्म अनुभव गर्ने सक्ने र समाजको भविष्य हेर्ने सक्ने दुरदुष्टि भएको हुनुपर्छ । NST को चुनाब र नेतुत्व फगत टेक्सास वासि नेपालीको मात्र विषय पक्कै हैन । यो समग्र अमेरिकावासि लगायत विश्व भर रहेका नेपालीहरुको सामाजिक संस्थाको रोल मोडलको रुपमा उभिएको छ। NST भएर नै NCSC को जन्म भयो । NCSC भएर नै आज हामी डालसमा संस्कृतिक केन्द्र एउटा सबै नेपालीको आकर्षणको विषय बनेको छ ।
हामी संस्थालाई नेतृत्व गरिरहँदा वा भनौ नेतुत्व चयन गर्दै गर्दा, हाम्रा छोरा छोरीलाई त्यो संस्था मार्फत के गदै छौ वा के गर्ने छौ ? त्यसको योजना र तयारी के छ ? NST लाई आज मिडल स्कुल, हाई स्कुल जाने हाम्रो नेपाली छोरा छोरीहरुले किन सम्झिने ? कि हाम्रानेपाली राजनितिक पाटिका वैदेशिक व्योरोको खेल मात्र खेल्ने रणभुमि बनाउँने र रमाउने ?
हामिले हाम्रा वाल बच्चालाई एक आपसमा चिनजान गर्ने, साथि बनाउँने ,नेतुत्व गर्ने क्षमताको विकास गर्ने र त्यसका लागी हामीले कस्तो वातावरण बनाउन सकिन्छ भनेर आज त्यस प्रकारको कार्यक्रम दिन सक्ने कि नसक्ने ? यस्ता समग्र विषयलाई समेट्न नेतुत्व दुरदुष्टिपुर्ण र विवेकि हुनु पर्छ l नेतृत्व विस्तारै विकास हुने हो। त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ ।
के हो ओमिक्रोन ? मुख्य १० लक्षण र सुरक्षित रहने उपाय – डा. रविन्द्र पाण्डे
युएस खबरकर्मी पत्रकार दाहाल तेस्रो पटक संक्रमित